इन्जिनियर नरेशमान शाक्य– जो शनिबार पनि घरमा बसेर अफिसको काम गर्छन् - Engineers Post
इन्जिनियर नरेशमान शाक्य– जो शनिबार पनि घरमा बसेर अफिसको काम गर्छन्
अस्मिता खड्का April 17, 2021
काठमाडौं झोंछेका ५० वर्षीय नरेशमान शाक्य जियोटेक्निकल इन्जिनियर हुन् । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूहअन्तर्गत हाइवे उपसमूह प्रथम श्रेणीका सहसचिव उनले हरकोर्ट बटलर टेक्निकल इन्स्टिच्युट (एचबीटीआई)बाट सिभिल इन्जिनियरिङ पूरा गरेका हुन् । बेलायतबाट जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङमा स्नात्तकोत्तर गरेका शाक्यले पहिरो नियन्त्रणमा विज्ञता हासिल गरेका छन् ।
बायो इन्जिनियरिङ र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ विधिमार्फत सन् २००३ देखि २००५ मा सम्पन्न पृथ्वी राजमार्गस्थित कृष्णभीर पहिरो नियन्त्रणको डिजाइन शाक्यले गरेका थिए । जुन अहिले पहिरो नियन्त्रणको उदाहरणका रूपमा चिनिन्छ । ई. शाक्यले पुलसम्बन्धी करिब ११ वर्ष काम गरेका छन् । पुलबारे आफूले नयाँ प्रविधिलाई नेपालमा कसरी भित्र्याउने भन्नेबारे काम गरेको उनी सुनाउँछन् ।
‘वल्र्ड बैंकको प्रोजेक्टका लागि केही समय कोर्डिनेटरका रूपमा पुलसम्बन्धी काम गरेँ । त्यसबेला पुल मर्मतको काममा नेपालमा नयाँ टेक्नोलोजी कसरी भित्र्याउने र कसरी चिनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर काम गरेको थिएँ ।’ हाल शाक्य नागढुंगा-सिस्नेखाला सुरुङमार्ग निर्माणमा खटिएका छन् । सुरुङमार्ग आयोजनाका निर्देशक उनलाई काम बाहेकका कुरामा खासै फुर्सद हुँदैन ।
फुर्सदमा घर र अफिसको काम
शाक्य हरेक दिन काममै व्यस्त रहन्छन् । उनले मुस्किलले फुर्सद मनाउन पाउँछन् । ‘शनिबारका दिन घरभन्दा अफिसकै काममा व्यस्त हुन्छु,’ उनी थप्छन्, ‘किनकी अफिसको महत्वपूर्ण र छुटपुट काम हुन्छ । कहिलेकाहीँ कतिपय रिपोर्टहरू बनाउनुपर्ने, रिपोर्ट पढ्ने र प्रतिक्रिया दिनुपर्ने काम हुन्छ । अलिअलि घरको काम र बाँकी अफिसको काम शनिबार घरमै बसेर गर्छु ।’
विगत छ महिनादेखि शाक्य नागढुंगा-सिस्नेखाला सुरुङमार्ग निर्माणको काम व्यस्त छन् । त्यहाँ उनले जियो टेक्निकल स्टडि गर्ने, रिपोर्ट बनाउनेलगायत काम गर्छन् । सुरुङमार्गको काम सम्पन्न गर्न अब करिब २ वर्ष समय लाग्ने उनको अनुमान छ । उनी भन्छन्, ‘फेरि कोरोना संक्रमण बढेको छ । कोरोनासँगै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर काम गर्दा पनि कम्तीमा २ वर्ष समय लाग्ने देखिन्छ ।’
रिसर्च रिपोर्ट पढ्ने
ई. शाक्य शनिबारको दिन पनि घुमघाममा समय बिताउँदैनन् । त्यसको सट्टा आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुस्तक तथा अन्य अध्ययन सामग्री पढ्ने गर्छन् । यसले आफ्नो कामलाई झनै सपोर्ट मिल्ने उनी बताउँछन् । ‘शनिबार केहि फुर्सद मिल्ने हुँदा अन्य किताबभन्दा पनि आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय\_अन्तर्राष्ट्रिय ‘केस स्टडि’ एवम् पुस्तक पढ्ने गर्छु,’ उनी सुनाउँछन्, ‘पहिले पहिले त मैले केस स्टडि लेख्थे पनि । अचेल लेख्न फुर्सद हुँदैन । त्यसैले आफ्नो ज्ञान बढाउन भए पनि अध्ययन गरिरहेको हुन्छु ।’
परिवारलाई कम समय
ई. शाक्यको दिदी, दाइभाउजु, दुइटा छोरा र एउटा छोरीसहितको परिवार छ । कामको व्यस्तताका कारण आफ्ना परिवारका सदस्यलाई समय दिन नभ्याउने उनी बताउँछन् । ‘शनिबार होस् या अन्य बार अफिसको कामबाट खासै फुर्सद मिल्दैनव,’ इन्जिनियर्स पोस्टसँग उनी सुनाउँछन्, ‘त्यसैले परिवारलाई समय दिन पाएको छैन । फुर्सद मिलेमा कम सयम भए पनि दिन्छु ।’
स्वास्थ्य र खानपान
ई शाक्य आफूसँगै अरूको स्वास्थ्यप्रति सजग देखिन्छन् । काम गर्दाताका साइटमा अपनाउने सुरक्षा महत्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । ‘कहिलेकाहीँ जोशमा काम गर्दा स्वास्थ्य ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने यादै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर कोरोना आएदेखि साइटमा डबल मास्क लगाएर काम गर्छौँ । हात धुने, दूरी कायम राखेर काम गर्छौँ । पुलमा काम गर्दा पनि मैले हेलमेट र ज्याकेट अनिवार्य लगाउथेँ । मैले लगाएपछि अरू इन्जिनियर, ओभरसियरले पनि लगाउँथे ।’
स्वस्थ जीवनशैलीभन्दा अन्य शारीरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने ई. शाक्य खानपानप्रति आफू खासै सजग नरहेको बताउँछन् । ‘मेरो खानपानको टुंगो हुँदैन । बिहानको खाना कहिलेकाहीँ दिउँसो ३ बजे खाइन्छ । कहिले बिहान ७ बजे नै खाइन्छ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘साइटमा पनि अवस्था हेरेर खानपान हुन्छ । खानामा पटक्कै सन्तुलन छैन । त्यसैले मलाई ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ।’
#इन्जिनियर #नरेशमान_शाक्य #शनिबार
रचनाकार पन्थीले जितेको धरहरा डिजाइनको लडाई, प्रधानमन्त्रीसँगको दोस्रो भेटको त्यो निर्णय
‘इन्जिनियरको व्यथा अरूलाई के था’ को भित्री कथा
५२५ रुपैयाँको सरकारी जागिर छाडेर कल्सल्टेन्सी क्षेत्रमा चम्किएका इन्जिनियर केशव